SERASERA SY FAMPAHALALAM-BAOVAO : Feno 10 taona ny Gazety “La verité”
Tamin’ny sabotsy 02 Febroary 2019 lasa teo no nankalazaina tetsy amin’ny « Villa Pradon » ny faha-10 taonan’ny Gazety « La verité » izay Gazety rahavavin’ny Ino vaovao faritra ihany. 3 février 2019
Samy ao anatin’ny Vondrona “Sodiat » ny gazety « La verité » sy ny Gazety « Ino Vaovao Faritra ». Maro ny lalana nolalovana vao tonga amin’izao toerana misy azy izao ny gazety « La verité ». Raha ny foiben-toerany fotsiny no tsiahivina dia efa intelo niova izany.
Teny am-piandohany dia teny Ivato no ivon-toeram-piasana tamin’izany ary efa nifindra tao Ankorondrano izy taorian’ izay. Ankehitriny kosa dia eto amin’ny « Villa Pradon » Antanimena no miorim-paka ny Gazety. Tanjona kendreny ny fanomezana fahafaham-po hatrany ny mpamaky sy ny fiezahana hampahafantatra ny zava-misy marina miseho eto amin’ny firenena. Telo ireo akanga sisa nanamborana nanorina ny gazety no mbola am-perinasa ankehitriny. Isan’izany filohan’ ny kômity mpitantana ny gazety, Rabarijhon Hery Mampionona sy ny Tonian’ny fanoratana, Rabearisoa Sandra ary ny mpanao gazety, Ramavo-nirina Patricia. Efa nankalazaina, hoy ny filohan’ny kômity mpitantana , ny laharana faha-1000 an’ny gazety, ka inoana fa tsy ho ela dia hankalazaina indray ny fivoahan’ny laharana faha-4 000 satria amin’ity anio ity no hivoaka ny laharana faha-3229.
Nirary soa ho an’ny Gazety La Verité sy ireo rehetra tsy mikely soroka nampihodina ity orinasan-tserasera ny Filohan’ny flankevi-pitantanana Andrianasolo José, nandritra ity ny lanonana fanamarihana ny faha-10 taona ity. Isan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Vondrona Sodiat nanome ny voninahitra ny lanonana ny Tale jeneraly Razanamparany Eric Maminirina, Tale mpandrindra ny vondrona Sodiat Ramatoa Razakasolo Herisoa, ny tale Mamy Rakotobe.